“बिहान उठ्दा कुन कुन बस्तुहरुदेखियो भने दिन अशुभ बित्छ त ? अवश्य पद्नुहोस” – Krazy NepaL
November 14, 2020 551
हामी विश्वकै’ मानिस नीति तथा जीवन शास्त्रमा एकदमै विश्वास गर्छौ । धार्मिक ग्रन्थ’हरु भन्दापनि नि’क्कै माथी हुन्छन् नीतिशास्त्र । हामीले अहिले कुरा गरिरहेको चै चाणक्य शास्त्र हो ।यो विश्वकै मानव जीवनमा अति जरुरी बनेको छ । यसैले दुनियाँले नै यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । चाणक्य”को नाम विभिन्न शास्त्रमा एकदम सम्मानका साथमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ।
चाणक्यनीति बचन विश्व भरि नै प्रचलित बिधि हो। चाणक्य पाटलीपुत्रका विद्वान थिए। चाणक्यनीति बचनले हर कोहिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन मदत गर्छ।चाणक्यको व’चनलाइ हाल सम्म पनि कसैले इन्कार गर्न सकेका छैनन्।
ऐना;अधिकांश मानिसहरु बिहान उठेर सबै भन्दा पहिला आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्ने गर्छन। कोहि व्यक्तिहरु यसो गर्नु दैनिक बानि हुन सक्छ। तर शास्त्र अनुसार बिहान उठ्न साथै ऐना हेर्नु दुर्भाग्यको कारण हो। यसो गर्दा पुरै दिन नकरात्मक संग चल्ने मान्यता रहेको छ। त्यसैले सोच विचार गरे’र मात्र बिहानको समयमा ऐनाको अगाडी जानु शुभ मानिन्छ।
आफ्नै कसैसंग झगडा’: चाणक्यनीति अनुसार बिहान ‘उठ्ना साथ आफ्नै कसैसंग झगडा पर्नु भनेको एकदम गलत काम हो। तर यदि बिहान उ’ठ्ने बित्तिकै कुकुर , बिरालो’ त’था अन्य कुनै जी’व जनावरको बिचको झगडा देख्नुलाई अत्यन्तै अशुभ मानिन्छ। यस्तो देखेमा उक्त दिन संकटका साथमा व्यतित हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैले गर्दा झग’डा भईरहेको स्थानबाट केहि टाढा जानु नै उचित हुन्छ।
चा’णक्यनीति’का अनुसार जसरी हा’मी बिहान उठ्दा’ आफ्नै अनु’हार देख्नबा’ट ऐना देखी टाढा हुनु पर्छ’ त्यस्तै गरि अरु कसैको अनुहार पनि देख्नु अशुभ हुन्छ। यदि यसो भएमा इष्टदेवको ध्यान गर्नु पर्दछ। साथ–साथै भगवानको नाम स्मरण गर्दै उठ्नाले शरीरमा सकारात्मक उर्जा बढ्नुका साथै दिन समेत राम्रो संग बि’त्ने मान्यता रहीआएको छ।
जीव जनावर तथा गाउँको नाम लिनु हुदैन: चाणक्यनीतिमा उ’ल्लेख भएअनुसार जब हामी बिहानीको नास्ता गर्छौ तब हामी दिनभरी नै स्फूर्ति र ताजगीको अनूभूत गर्छौ। बिहानको समयमा नास्ता गर्नु भन्दा पहिले भुले’र पनि कुनै जीव जनावर तथा गाउँको नाम लिनु हुदैन। शास्त्रका अनुसार यी सबै गर्नुभन्दा बरु हत्केलालाई जोडेर आफ्नो हस्तरेखा हेर्नुलाई शुभ मानिन्छ।
Prev“डा. गोबिन्द केसीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भयो “
Next“परी तामाङले आफ्नो मूल्य ५० हजारसम्म भनि लाईभमा गरिन एस्तो हर्कत (भिडियो सहित)”